नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : एमाले र काङ्रेसलाई आपसमा भिडाएर यसरी षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्दैछन छबिलाल तर बुझ्दैनन शुशिल, रामचन्द्र, शेरबहादुर, झलनाथ, माकुने र चतुर भनिने केपीहरु !
एमाले र काङ्रेसलाई आपसमा भिडाएर यसरी षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्दैछन छबिलाल तर बुझ्दैनन शुशिल, रामचन्द्र, शेरबहादुर, झलनाथ, माकुने र चतुर भनिने केपीहरु !
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'संविधानसभामा बलियो भूमिका खोज्न' कांग्रेससँग नजिकिन थालेका छन् । कांग्रेसले एमालेको विरोधबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति कायम राख्ने र त्यसको संयोजक दाहाललाई बनाउने संकेत दिएपछि दाहाल नजिकिएका हुन् । राजनीतिक समितिको संयोजक आफू भए
संविधान निर्माणलगायतका विषयमा आफ्नो भूमिका बलियो हुने बुझाइ दाहालको छ । कांग्रेसको 'विशेष आग्रह' मा उनले संविधानसभामा सहभागी हुने स्पष्ट संकेतसमेत दिइसकेका छन् । निर्वाचनमा 'धाँधली' भएको भन्दै त्यसको छानबिन हुनुपर्ने, विघटित संविधानसभामा भएका सहमति कार्यान्वय गर्नुपर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने र संविधानसभा बाहिरका दललाई समेट्न पहल गर्ने मागलाई कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै एमाओवादीले संविधानसभामा जाने संकेत गरेको हो । 'अध्यक्षलाई बलियो भूमिका दिएमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारका बेला संविधान निर्माण सहज हुने बुझाइ कांग्रेसको हुन सक्छ,' प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, 'कांग्रेससँग सकारात्मक दिशामा छलफल भइरहेको छ ।' पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुअघि संविधानका विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक हुँदा संविधानका धेरै विवाद मिलेका थिए । फेरि पनि उनले राजनीतिक समितिको संयोजक भएर त्यस्तै भूमिका खेल्ने मनस्थिति बनाएका छन् । कांग्रेस र एमाओवादीको सहकार्यले दुवै दललाई फाइदा पुग्ने दाबी उनीहरूको छ । राजनीतिक समितिको संयोजक दाहाललाई बनाएर कांग्रेसले संविधान निर्माण र सरकार सहज ढंगले अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ । संविधान निर्माणका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेमा दुवै दलको स्वार्थ गाँसिएको छ । ठूलो दल कांग्रेससित सहकार्य गरेर आफ्ना एजेन्डा संविधान, सत्य निरूपण आयोगमा समावेश गराउने रणनीति एमाओवादीको छ । उसले राजनीतिक समितिको निरन्तरता, सत्य निरूपण आयोग गठनमा कांग्रेस सकारात्मक भएको जनाएको छ । 'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउनेमा कांग्रेस सकारात्मक छ,' सापकोटाले भने, 'आयोग गठनबारे उसले राजनीतिक ढंगले सोचेको छ ।' १० वर्षे सशस्त्र युद्धका बेला सरकारमा कांग्रेस र युद्धमा माओवादी थियो । आयोग गठनमा दुवै पक्षको गम्भीर चासो छ । एमाओवादीका चासोमा सकारात्मक हुँदै कांग्रेसले सरकार निर्माणलगायतका विषयमा आफ्नो चासोप्रति सकारात्मक हुन आग्रह गरेको छ । एमाओवादीलाई संविधानसभामा प्रवेश गराएर सरकार बनाउन उसले एमाओवादीको 'समर्थन' खोजेको छ । एमाओवादीले पार्टीको नराम्रो पराजय भएको अवस्थामा सरकारमा जान नसकिने उल्लेख गर्दै संविधानसभामा सहभागी भएर सघाउने आश्वासन दिएको स्रोतको भनाइ छ । निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्नेबारे 'छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने,' संविधान निर्माणमा आफ्ना कुरा समावेश गराउने र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरामा सकारात्मक भए सरकार निर्माणमा 'रचनात्मक' भूमिका खेल्ने एमाओवादीको भनाइ छ । 'हाम्रो चासो संविधान निर्माणमा पार्टीले उठाएका एजेन्डा समावेश गर्ने हो' एक नेताले भने, 'त्यस्तो अवस्थ्ाामा सरकारमा नगएर समर्थन गर्ने बाटो खुला राख्न सकिन्छ ।' ती नेताले कांग्रेससँग सकारात्मक कुरा भइरहेका बेला यस्तो धारणा दिए । निर्वाचनको पूर्ण मत परिणाम नआउँदै संविधानसभामा नजाने घोषणा गरेको एमाओवादीले कांग्रेससँगको लामो औपचारिक/अनौपचारिक छलफल पछि संविधानसभामा गएर 'संघर्ष' गर्ने बताएको छ । कांग्रेस, एमाओवादीको निकटताले कांग्रेस र एमालेबीच दूरी बढ्ने संकेत भने देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच दूरी बढे आफूलाई फाइदा हुने एमाओवादीको बुझाइ छ । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकार निर्माणको क्रममा कांग्रेसले चित्त बुझ्दो प्रस्ताब नल्याए एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकार गठनको सवालमा कांग्रेसको प्रस्तावको प्रतिक्षामा बसेका छौं नेपापले भने, 'चित्त नबुझे प्रतिपक्षमा बस्छौं ।' संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी भए पछि दोश्रो पटक गृह जिल्ला आएका नेता नेपालले बिहीबार गौरमा पत्रकार महासघ रौतहट शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने सबै पद कांग्रेसले लियो र एमालेलाई वाईपास गर्ने काम भयो भने प्रतिपक्षमा बस्छौं । एमाले कांग्रेसको प्रस्ताव हेर्न र सुन्न आतुर छ उनले भने, 'सरकार बनाउन कस्तो प्रस्ताव आउने हो त्यस पछि एमालेले अन्तिम निर्णय लिन्छ ।' एमाले प्रतिपक्षमा बसे कांग्रेसले कसरी सरकार बनाउँछ भन्ने सँचारकर्मीको प्रश्नमा नेता नेपालले भने,'झोरझार पारेर सरकार बनाउला नी । ' राष्ट्रपति हटाउने बिषयमा बढेको दलहरुबीको विवाद कायमै रहेको उनले बताए । सबै बिषयमा चाँडै टुङ्गो लाग्ने समेत उनको भनइ थियो । संविधान निर्माणको क्रममा कुनै किसिमको बाधा ब्यवधान आए आफूहरुलाई मान्य नहुने नेता नेपालले बताए । त्यसैको लागि पनि एमाओवादीलाई मिलाउन हरसम्भव प्रयास जारी छ उनले थपे । यभसैगरी तराईमा बढेको चिसोका कारण दलीत बस्ति प्रभावित हुन थाले पछि नेता नेपाल आफ्नो क्षेत्रको दलीत बस्तीमा कम्बल बितरण गर्न बुधबार आएका हुन् । उनले दलित बस्तीका ६५ परिवारलाई कम्बल वितरण गरेका थिए । बैशाख भित्र स्थानीय निर्वाचन गरेरै छाड्ने नेता नेपालले दावी गरे । निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै आएको एमाओवादीले भने जस्तै समिति नबन्ने तर, सविधानसभाबाट समस्यका बारेमा छलफल गर्न सकिने उनले बताए । गृह जिल्लामा आउदा उनलाई कुन क्षेत्र छाड्दै हुनुहुन्छ भनेर कार्यकर्ताले हैरान पार्ने गरेको छ । उनले गृह जिल्ला आफ्नो मुटु भएको बताउँदै अाए पनि कुन क्षेत्र छाड्ने भन्ने पार्टीले निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।